မောင်ရင်ငတေ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 3
Bataclan ပြဇာတ်ရုံ မူလအနေအထား မောင်ရင်ငတေ – မုန်တိုင်း၏အစ သို့မဟုတ် Ba-Ta-Clan ရဲ့ အဆုံးနိဂုံးလား (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ Le Bataclan, L’Origine Ba-Ta-Clan ဘာတာကလန် ၁၈၆၄ ခုနှစ်မှာ...
မောင်ရင်ငတေ – ဘဝထဲကလူသား ၊ ပါရီ သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ခြင်း၏ မနက်ဖန်များ
ပါရီ သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ခြင်း၏ မနက်ဖန်များ (ဓါတ်ပုံ မရငတ) မောင်ရင်ငတေ – ဘဝထဲကလူသား ၊ ပါရီ သို့မဟုတ် မျှော်လင့်ခြင်း၏ မနက်ဖန်များ (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅ လက်သစ်ဈေးသည်တယောက်ရဲ့ ပါရီမေထရိုထိပ်က ဈေးဆိုင်လေး...
မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ (မာရီ အန်တွမ်းနက် သို့မဟုတ် ကိတ်မုန့်စားသူကြီး) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၅ Marie-Antoinette (1775) par Gautier d’Agoty (1740-1786) (Photo Google)...
မောင်ရင်ငတေ – အတွေးစတစ (နယ်စည်းမခြားအတွေးများ) (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၆၊ ၂၀၁၅ ပကျော့ရဲ့ မိုတောင်ဂိတ်ဝရောက် မရငတ (Photo KCorail) မောင်ရင်ငတေတယောက် ဒီတခေါက် ထိုင်းနိုင်ငံခေါ် စီယမ်ခေါ် ယိုးဒယားခေါ် ယပက်လက်တို့ရဲ့...
မောင်ရင်ငတေ – ဘဝထဲကလူသား (လှေစီးခရီးနှင်ကြသူများ) (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅ လှေစီးခရီးနှင်ကြသူများ Boat People လက်သစ်လက်ဟောင်းများ (Photo Google MKN) Boat People . ....
မောင်ရင်ငတေ – အတွေးစတစ (ငါးသိန်းတန်အိပ်မက်)
Aéroport International Don Muang (ဓါတ်ပုံ မရငတ) မောင်ရင်ငတေ – အတွေးစတစ (ငါးသိန်းတန်အိပ်မက်) (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၈၊ ၂၀၁၅ ဟို တမြန်နေ့ကရော မနေ့ကပါ မောင်ရင်ငတေ အိပ်မက်...
မောင်ရင်ငတေ – ပါရီပုံရိပ်များ
ခပ်ဝေးဝေးက မြင်ရပါတဲ့ အနုပညာတောင်ကုန်း (ဓါတ်ပုံ မရငတ) မောင်ရင်ငတေ – ပါရီပုံရိပ်များ အိုင်းစတိုင်း၊ ပီကာဆို နဲ့ Lapin Agile (မိုးမခ) သြဂတ်စ် ၂၂၊ ၂၀၁၅ ပါရီမြို့တော်မှာ အထင်ကရ...
မောင်ရင်ငတေ – မင်း မရှိတဲ့ တိုင်းပြည်
မောင်ရင်ငတေ – မင်း မရှိတဲ့ တိုင်းပြည် (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၃၁၊ ၂၀၁၅ ငါ ချစ်မြတ်နိုးရပါတဲ့ မင်းမရှိတော့တဲ့ တိုင်းပြည်၊ မင်းမှမရှိတော့ ငါမနေချင်တော့ပါတဲ့ တိုင်းပြည်၊ ဒီတိုင်းပြည်မှာ ငါချစ်တဲ့...
မောင်ရင်ငတေ – ပါရီပုံရိပ်များ ပီကာဆိုရဲ့လမ်း (Rue des Grands-Augustins) (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၈၊ ၂၀၁၅ ၁၉၁၀ ခုနှစ် စဲန်းမြစ် ရေကြီးစဉ်က Rue des Grands-Augustins (Photo...
ပြင်သစ်မှအမေရိကားသို့မပို့ခင် မူရင်းလေဘာတီရဲ့ခေါင်းပိုင်း (၁၈၇၈) (Photo Google) La tête exposée à l’Exposition universelle de 1878, Champs-de-Mars à Paris. မောင်ရင်ငတေ – ရောက်တတ်ရာရာအတိုအစများ...
မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ (ပြင်သစ်သမိုင်းမှ လူဝီဘုရင်များ – ၂) လူဝီဘုရင် အယောက်နှစ်ဆယ် (Roi des Francs) (မိုးမခ) မေ ၁၊ ၂၀၁၅ La dynastie Carolingiens...
မောင်ရင်ငတေ – ရာဇဝင်ထဲကလူသားများ (ပြင်သစ်သမိုင်းမှ လူဝီဘုရင်များ – ၁) (မောင်ရင်ငတေရဲ့ မှတ်ရလွယ် ပြင်သစ် လူဝီ နှစ်ဆယ်) (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၉၊ ၂၀၁၅ L’expansion de...
မောင်ရင်ငတေ – ပန်းချီဆရာ ဗန်ဂိုး ၁၆၂ နှစ်ပြည့်
မောင်ရင်ငတေ – ပန်းချီဆရာ ဗန်ဂိုး ၁၆၂ နှစ်ပြည့် (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၊ ၂၀၁၅ ● ဗန်ဂိုးရဲ့ အရုပ် အရိပ် အရောင်များ ဗန်ဂိုးမွေးဖွားခဲ့ရာ နယ်သာလန်နိုင်ငံ အနောက်စွန်း...
L’obélisque de la Concorde (ဓါတ်ပုံ မရငတ)မောင် ရ င် ငတေ – ပါ ရီ ပုံ...
မောင်ရင်ငတေ – မော်ကွန်း
မောင်ရင်ငတေ – မော်ကွန်း (မိုးမခ) မတ်လ ၁၁၊ ၂၀၁၅ ရေးရဲသူတွေ ရေးကြတယ် …။ တွေးရဲသူတွေ တွေးကြတယ် …။ ဝေးရဲသူတွေ ဝေးကြတယ် …။ ပြေးရဲသူတွေ ပြေးကြတယ် …။...
မောင်ရင်ငတေ – သမိုင်းကျောင်း
မောင်ရင်ငတေ – သမိုင်းကျောင်း (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁၊ ၂၀၁၅ သမိုင်းထဲက ကျောင်း ကျောင်းထဲက သမိုင်း ကျောင်းသားမှန်ရင် သိကြ၊ ရမ်းစရာရှိရင် ရမ်းကြ လွမ်းစရာရှိရင် လွမ်းကြ ကြမ်းစရာရှိရင် ကြမ်းကြ၊...
မောင်ရင်ငတေ – နှစ်ဆယ်ကျော်အလွမ်း – ဘီကေကေအစုန်အဆန် (လေယာဉ်စီး၍ ခရီးနှင်မယ်) (မိုးမခ) ဇန်န၀ါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၉ PARIS DOHA BANGKOK (ဓါတ်ပုံ မရငတ) မောင်ရင်ငတေ တယောက် မရောက်တာ...